नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : साँच्चै २१ डिसेम्बर अर्थात पुस ६ गते शुक्रबार पृथ्वीको अन्त्य हुने नै हो त ? ‘ढुक्क हुनुहोस्, शुक्रबार केही हुँदैन, पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैन । यो ‘निराधार हल्ला मात्र हो, केही हुँदैन ।’
साँच्चै २१ डिसेम्बर अर्थात पुस ६ गते शुक्रबार पृथ्वीको अन्त्य हुने नै हो त ? ‘ढुक्क हुनुहोस्, शुक्रबार केही हुँदैन, पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैन । यो ‘निराधार हल्ला मात्र हो, केही हुँदैन ।’
फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा कसैले हाँसीमजाक त कसैले साँच्चै डर नै मान्ने गरी २१ डिसेम्बरबारे आ-आफ्नै टिप्पणी प्रस्तुत गरेका छन् । कतिले शुक्रबार घरबाट बाहिर नगएर परिवारको साथमा बस्ने बताएका छन् त कतिले जाँच भएपनि नपढी बस्ने भनेका छन् । अनि कतिले चाहिँ केही होला कि भनेर चूप बसौंला, केही भएन भने चाहिँ के गर्ने होला भनेर ठट्यौली पनि गरेका छन् । इन्टरनेटमा झुण्डिनेहरुलाई मात्र होइन, गाउँठाउँसम्म पनि डिसेम्बर २१ को चर्चा र हल्ला पुगेको छ । साँच्चै २१ डिसेम्बर अर्थात पुस ६ गते शुक्रबार पृथ्वीको अन्त्य हुने नै हो त ? यस्तो प्रश्न गर्दा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नाष्टका प्राज्ञ तथा खगोलविद ऋषि शाह भन्नुहुन्छ- ‘ढुक्क हुनुहोस्, शुक्रबार केही हुँदैन, पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैन । यो ‘निराधार हल्ला मात्र हो, केही हुँदैन ।’ सौर्यमण्डल र खगोलीय पिण्डको बारेमा अध्ययन गर्दै आएको अमेरिकी अन्तरीक्ष एजेन्सी नासाले पनि यो हल्ला निराधार भएको ठहर गरेको छ । ‘घोर निराशावादी
मानिसहरु मात्र यस्ता कुरामा आश्वस्त हुन सक्छन्’ नासाले भनेको छ ।